Xhosa (xh) : Template “kcmsamba” : Oneiric (11.10) : Translations : kde-workspace package : Ubuntu
Translated by Lwandle Mgidlana on 2009-07-18
Inyuswe Phantshi kwe
Olu luhlu lubonisa i Samba kunye ne NFS yeemvelaphi ezahlulwayo ezinyuselwe kwindlela yakho esuka kwezinye iinginginya. U "Udidi" umhlathi ukuxelela noba imvelaphi enyusiweyo yi Samba okanye ludidi lwemvelaphi ye NFS. U "Imvelaphi" umhlathi ubonisa igama elichazayo lwemvelaphi eyahlulwayo. Okokugqibela, umhlathi wesithathu, onombhalo "Onyuswe phantsi" ubonisa indawo kwindlela yakho apho eyahlulwayo imvelaphi inyuselwa khona.
Ifayile yenkqubo ye Samba:
Bonisa iinxumaniso ezivuliweyo
Bonisa iinxumaniso ezivaliweyo
Bonisa iifayile ezivuliweyo
Bonisa iifayile ezivaliweyo
Contributors to this translation: Lwandle Mgidlana.